SIDEE LOOGA XUSAY 18 MAY GUUD AHAAN NORWAY GARA AHAN OSLO | Toggaherer's Weblog
XAFALAD AAD LOO SOO AGAASIMAY OO KA DHACADAY QASRIGA MADAXTOOYADA S/L
SIDEE LOOGA XUSAY 18 MAY GUUD AHAAN NORWAY GARA AHAN OSLO
Oslo 18 May 2009 (THN)
Waxaa Magaala madaxda dalka Norway Oslo looga dabaal degay xuska sanadguurada 18-ka May sanadkan si ka duwan sidii sanadadii hore.
Sanadkan xuska munaasabadani wuxuu socday muddo sadex cisho ah oo ka soo bilaabmay maalintii sabtidii ay bishu ahayd 16-kii May iyadoo lagu soo afjaray shalay oo Isniin ahayd bishuna ahayd 18-kii May xafladii abid u weyneed ee loo qabto Somaliland.
Gelinkii hore ee sabtinimo waxaa la qabtay koob kubada cagta ah oo ay ka soo qeyb galeen 12 kooxood oo ka kala socday ciyaartoyga ku dhaqan dalka Norway iyagoo halka ku soo bandhigay ciyaar heer sare ah.
Koobkii sanadkan lagu xusayey 18-ka May waxaa hantay kooxda Qaran kuwaasoo ku mutaystay cayaar wanaag aad u hufan.
Isla habeenimadii axadu soo galaysay waxaa la qabtay xaflad isugu jirtay khudbado iyo maaweelo, waxaa halkaa ka hadlay Safiirka Somaliland u fadhiya Norway Mr. Maxamed Aden, Gudoomiyaha Jaliyada Norway Mr. Xuseen Cadib iyo xubno badan oo ahaa indheer garadka Jaaliyada ku dhaqan dalka Norway, waxaa xidhiidhiye ka ahaa Mr. Aden Looshade oo isaguna kaalinta xidhiidhinta bilad sharaf ku mutaystay habeenkaas.
Hadaba reer Norway intaasoo keli ah kumay ilaabin Xuska maalinta taariikhiga ahe waxay go’aansadeen bal sanadkan inay qadiyada Somaliland dibada soo dhigaan oo hool dhexdii ahaan jirtay intii hore, waxaana la go’aansaday in maalinta 18-ka May lagu qabto xaflad aad u balaadhan badhtamaha magaalada caasimada Norway Oslo.
Shalay oo bishu ahayd 18-ka May ayaa subixii hore roob laxaad lehi ka curtay samada magaalda Oslo kaasoo halis geliyey hirgalinta heshiiskii reer Norway ee ahaa in magaalada barta ugu socodka badan lagu qabto xafladan iyadoo roobkii istaagi waayey awgeed.
Waxaa xusid mudan inaan khadka taleefanka kula xidhiidhay Gudoomiyaha jaaliyada Mr. Xuseen Cadib weydiiyeyna sida ay u qabsoomi karto xafladu maadaama roobkii joogsan waayey, Xuseen wuxuu iigu jawaabay walaal halganka Somaliland loo Soo maray ragbaa rasaasta isku dhigayey inagana maanta roob ina joojin maayo.
Hadaba goor sheegtadu markay ahayd shantii galabnimo, daruuruhuna aad moodo inay is dhiibeen markii loo joojin waayey ayaa laga bilaabay barta halbawlaha magaalada xaflad si heer sare ah loo soo maamulay oo dhamaan guddida jaaliyada,Safaarada iyo wax garadka reer Norway ay cudud isugu geeyeen.
Midho dhalkii wada shaqeentaas waxaa ka dhashay xaflad aan la arag hore.
Waxaa halkaa isugu yimid tiradii ugu badneed ee xaflad isugu timaada abid, waxaana suuqa magaalada meel walba aad ku arkaysay Calanka Tawxiidka ee Somaliland oo ka babanaya, dadka is dhaaf-dhaafayaa waxay isku bariidinayeen oodhaahda Ciid-Wanaagsan iyaga oo wada qiireysan ayeey calamada isku Salaamayeen.
Waxaa kale oo xusid mudan in maamulkii suurta geliyey qabsoomida xafladani ay uga soo baxeen howshoodii sidii la rabay iyo si ka badan, waxaana halkaa lagu hantay dhegaha shicibka u dhashay dalka Norway oo intooda badan aan waxba ka ogeyn qadiyada Somaliland iyadoo qof kasta oo Norwiiji ah loo qeybiyay waraaqo ku qoran afka Norwiijiga ah oo ka hadlaya qadiyada Somaliland iyo sababta maanta loo dabaal degayo, waxaa kaloo ka soo qeyb galay munaasibadaa Tv-yada iyo jaraayidka Norway Ka soo baxa qaar ka mid ah, kuwaasoo ii sheegay maraan wax ka weydiiyey Xaflada inay aad ula dhacsan yihiin sida dadka reer Somaliland ay uga dhab tahay qadiyada Somaliland.
Waxaa halkaa ka khudbadeeyay siyaasiyiin Norwiiji ah oo ka kala socday Xisbiyada Venstre-ha iyo SV, kuwaasoo sheegay inay Qadiyada Somaliland wax ka qaban doonaan.
Hadaba waxaan idiin soo wadnaa sawiradii xafladaha dabaal dega ee reer Norway iyo vidoe maqal iyo muuqaal ah oo aanu ka soo duubnay munaasibada taariikhiga ah.
Alla mahad leh,,,
C/raxman Cali Xassan.